Obama: “Aniga yaan la igu eedeyn soo bixitaanka Donald Trump” | shumis.net
Home » News » Obama: “Aniga yaan la igu eedeyn soo bixitaanka Donald Trump”
Obama: “Aniga yaan la igu eedeyn soo bixitaanka Donald Trump”
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa ka jawaabey eedeyn qaar kamid ah Xibiga Jamhuurigu ay ku eedeeyeen in uu ka danbeeyosoo bixitaanka iyo hormarka musharaxa isla xisbigooda Donald Trump.
– Jamhuuriyiintu wax badan ayey igu eedeeyeen, laakiin in aniga sabab la iiga dhigo soo bixitaanka qofka ay u dooranayaan isla xibigooda, waa Riwaayad!, ayuu yiri Obama, xili uu shir saxaafadeed la qabanayey Raysalwasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau.
Obama ayaa ka jawaabayey su’aal uu mid ka mid ah weriyaashu weydiiyey, in isagu masuul ka yahay soo bixitaanka iyo kicitaanka Donald Trump. Obama ayaa ku eedeeyey in Donald Trump ay soo saartey syaasadda Jamhuuriyiinta, iyo Warbaahinta xagjirka ah.
Musharaxa xagjirka ah ee Donald Trump ayaa si weyn u hoggaaminaya doorashada hordhaca ah musharaxa Xisbiga Jamhuuriga u matalaya doorashada Madaxweynaha ee dhacaysa bisha Nofeember Salaasada u horeysa.
Musharixii hore ee Xisbiga Jamhuuriga ahaana barasaabka Gobolka Louisiana Bobby Jindal ayaa ka mid ah dadka Obama ku eedeeyey soo bixitaanka Trump, waxaana uu joornaalka Wall Street Journal ku qorey qormo uu cinwaan uga dhigay “President Obama Created Donald Trump”, waxaana uu qoraalkiisa ku faaleeyey in siyaasadda Obama dhashey Donald Trump
Title: Obama: “Aniga yaan la igu eedeyn soo bixitaanka Donald Trump”